Isikhala seso lefoni Factory - China seso Materials Abakhiqizi, abahlinzeki
I-DIEN TECH inikeza ukuhlukahluka kwento ye-infrared ngokufana okuhle kwe-optical, ukumelana nokuguguleka kwe-acid-base kanye nokusebenza okuzinzile kwamakhemikhali ngamakristalu abaluleke kakhulu asetshenziswa ku-IR waveband, kufaka phakathi i-ZnSe ne-ZnS. Futhi ukucubungulwa kwalezi zinto ngokuya ngomdwebo nemingcele yezobuchwepheshe.
ICalcium Fluoride inokusabalalisa okuningana kwe-IR njenge-CaF ebukekayo2 windows, CaF2 ama-prism kanye ne-CaF2 amalensi. Amabanga amsulwa ikakhulukazi eCalcium Fluoride (CaF2) thola uhlelo lokusebenza oluwusizo ku-UV futhi njengamawindi e-UV Excimer laser. ICalcium Fluoride (CaF2) itholakala i-doped ne-Europium njenge-gamma-ray scintillator futhi inzima kuneBarium Fluoride.
I-ZnS ngamakristalu we-optical abaluleke kakhulu asetshenziswe ku-IR waveband. Kudluliswa uhla lwe-CVD ZnS yi-8um-14um, ukuthunyelwa okuphezulu, ukumuncwa okuphansi, i-ZnS enezinga le-multi-spectrum ngokushisa njll.